Prefektioran’ Antananarivo: “Mila mangataka alalana ny fiangonana hisokatra” | NewsMada
Prefektioran’ Antananarivo: “Mila mangataka alalana ny fiangonana hisokatra”
Nitondra fanamarihana, omaly, ny prefen’ny Polisy eto Antananarivo fa mila mangataka fahazoan-dalana ireo fiangonana manana fikasana hisokatra. Anisan’izany ny FJKM, efa nanao fanambarana amin’ny fomba ofisialy fa hiverina indray hisokatra.
Ankoatra izany, mila hentitra amin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Raisina avokoa ny anaran’ny olona tonga ao am-piangonana. Hatao izany hanamorana ny fanaraha-maso raha sanatria misy ny marary ary handraisana ny fepetra amin’ireo rehetra niara-nivory tamin’izany marary izany.
Tsy maintsy manasa tanana avokoa ireo rehetra miditra ao am-piangonana ary manao arovava. Tsy hadinoina ny elanelana iray metatra.
Efa nampihatra ireo rehetra ireo ny fiangonana FJKM nandritra ny fisokafan’ny fiangonana ny volana mey sy jona teo. Mbola vonona ny hanaja sy hanaraka izany ny fiangonana izay efa naniry fatratra ny fisokafan’ny fiangonana. Misy ihany anefa ireo kristianina mbola matahotra ny fitangoronana ka manapa-kevitra ny tsy ho any am-piangonana aloha mandra-pilamin’ny valanaretina Covid-19.